Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Ether iyaqhubeka nokuBuyisa, iqala kwakhona i-Uptrend ngaphezu kwe-$ 4,040
Ingozi ye-Ethereum ukuya kwi-3,436 yeedola ephantsi
I-Ether iyachacha kwi-downtrend
Ixabiso langoku: $ 4,107.13
Intengo yeNtengiso: $ 489,248,274,498
Umthamo wokuThengisa: $ 27,950,967,739
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Disemba 5, 2021
I-Ethereum (i-ETH) ixabiso laqhekeka ngaphantsi kwe-avareji ezihambayo kwaye lehla kabukhali ukuya ezantsi $3,436. Iinkunzi zathenga iidiphu njengoko ixabiso lilungisiwe ukuya kuthi ga kwi-4,235 yeedola. Ixabiso le-Ether liyaguquguquka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Ikhefu ngaphezu kwee-avareji ezihambayo ziya kubonisa ukuqaliswa kwakhona kwe-uptrend. Ngomhla we-4 kaDisemba, kwakukho ikhandlela kunye nomsila omude obhekiselele kwinkxaso ye-3,400 ye-$ .Umsila wekhandlela omude ubonisa ukuba indawo yenkxaso ye-3,436 ye-XNUMX yenkxaso yenkxaso yokuthenga ingcinezelo enamandla.
Okokuqala, imivalo yexabiso likaEtere ingaphantsi komyinge ohambahambayo obonisa ukunyuka okungaphezulu. I-Ethereum ikwinqanaba le-47 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin enkulu ngoku ikwindawo ye-downtrend kwaye iyakwazi ukuwa. I-Ethereum ingaphezulu kwe-80% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. I-altcoin ifikelele kummandla ogqithisiweyo wemarike. Abathengisi banokuvela kwindawo ethengiwe kakhulu.
Kwitshathi yeyure ye-4, i-Ethereum iphinde yaqala phezulu emva kokutshatyalaliswa kwamva nje. Abathengi baye batyhala i-altcoin ngaphezu komgca we-21 weentsuku ze-SMA kodwa banokujamelana nokukhatywa njengoko imarike ifikelela kummandla othengiwe kakhulu. Okwangoku, ngoDisemba 4 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 4,214.14.
Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Ether iqhubela phambili njengoko iinkunzi zeBulls zizuza amaxabiso amaninzi
I-Ethereum iphinda ibuyele, iphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo
I-Ether iphinda ibuyele phezulu kwi-4,820 yeedola
Ixabiso langoku: $ 4,692.36
Intengo yeNtengiso: $ 556,339,223,220
Umthamo wokuThengisa: $ 28,885,870,161
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Disemba 1, 2021
I-Ethereum (i-ETH) ixabiso liphinde lafumana amandla e-bullish njengoko i-Etere yaphuka ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. Nge-uptrend yangoku, i-altcoin enkulu inokuphinda ibuyele kwi-4,820 yeedola zangaphambili. Ukuba iinkunzi zeenkomo zaphula i-high yangaphambili, i-Ether iya kukhwela i-$ 5,000. I-ETH / USD ifikelele kwi-$ 4,781 ngexesha lokunyuka. I-uptrend ijongene nokuchasana kwindawo ephezulu yamva nje njengoko intengiso ifikelela kwindawo ethengwe kakhulu.
I-Ethereum ikwinqanaba le-58 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin enkulu ngoku ikwindawo ye-bullish trend and iyakwazi ukuqhubela phambili. Imivalo yexabiso le-Etere ingaphezulu kwemiyinge ehambayo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka kwengqekembe. I-Ethereum ingaphezulu kwe-80% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. I-altcoin ifikelele kummandla ogqithisiweyo wemarike. Abathengisi banokuvela kwindawo ethengiwe kakhulu.
Kwitshathi yeyure ye-4, i-Ethereum ikwintshukumo ephezulu. I-altcoin iphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. Okwangoku, ngoNovemba 30 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 4,964.35.
ETH / USD - 3 Itshathi yeYure
Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Ether iphosa kwi-3,960 yenkxaso njengeenkunzi zenkomo ezihlawulela ngaphezu kweNkxaso yangoku
I-Ethereum yehla ukuya kwi-3,916 yeedola
I-Ether ikwindawo ye-bearish trend
Ixabiso langoku: $ 4,101.19
Intengo yeNtengiso: $ 486,086,303,319
Umthamo wokuThengisa: $ 13,315,367,317
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 28, 2021
Iimali ze-Ethereum (ETH) ixabiso liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo emva kokugatya ukuchasana kwi-4.500 yeedola. NgoNovemba 26, uEtere wehla ngokukhawuleza ukuya ngaphantsi kweedola ze-3,916 njengoko iinkunzi zathenga iidiphu. Abathengi banomsebenzi onyukayo wokutyhala i-Etere ngaphezu kwee-avareji ezihambayo kunye nokuvavanya kwakhona i-$ 4,800 yokuxhathisa ngaphezulu. Namhlanje, i-altcoin iphinda iqalise phezulu ngaphezu kwenkxaso ye-3,960 yeedola. Inkxaso yangoku ibambe ukususela ngo-Oktobha 28. I-Ether iya kuphinda iqhube i-uptrend xa ixabiso liqhekeza ngaphezu kwee-avareji ezihambayo.
I-Ethereum ikwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin enkulu ithengisa kwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso lika-Ether lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibangela ukuba i-altcoin iyancipha. I-Ethereum ingaphezulu kwe-45% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. I-altcoin iphinde yaqala ukunyusa amandla.
Kwitshathi yeyure ye-4, i-Ethereum yenza ukunyuka okuphezulu. Abathengi bazama ukuphula ngaphezulu kwe-4,100 yeedola. Okwangoku, ngoNovemba 26 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 4,256.41.
Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Etere iyaguquguquka phakathi kwe-3,960 kunye ne-$ 4.400, i-Up-trending ayifani
I-Ethereum iyatshintsha phakathi kwe- $ 3,960 kunye ne- $ 4.400
I-Ether ithengisa ngendlela esecaleni
Ixabiso langoku: $ 4,210.54
Intengo yeNtengiso: $ 498,828,588,868
Umthamo wokuThengisa: $ 20,506,959,943
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 24, 2021
I-Ethereum (i-ETH) ixabiso liye laqhubeka liguquguquka phakathi kwemiyinge emibini ehambayo. I-Ether iya kuthambekela kuphela xa imilinganiselo ehambayo iphulwa. Izolo, abathengi batyhala i-altcoin kodwa abakwazanga ukuphuka ngaphezu komgca we-21 weentsuku ezihambayo. Namhlanje, i-Ether iyancipha kwi-avareji yeentsuku ze-50 ezihambayo. Oku kube yisenzo sexabiso ukususela ngoNovemba 18. Xa ixabiso liqhekeza ngaphantsi okanye ngaphezu komyinge ohambayo kwaye umfutho ugcinwa ngoko sinomkhuba.
I-Ethereum ikwinqanaba le-48 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-altcoin isendaweni ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso lika-Ether liphakathi komgca weentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ezihambayo ezibonisa ukuhamba kwecala. . I-Ether ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish.
Kwitshathi yeyure ye-4, i-Ethereum isephantsi. I-downtrend inokuthi iqalise kwakhona njengoko ijongene nokukhatywa kwi-4,400 yeedola.
Okwangoku, ngoNovemba 10 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-2.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 3,840.64.
Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Ether iphinda iqalise i-Uptrend, ijongene nokugatywa kwi-High yakutshanje
I-Ethereum ibuyisela ngaphezulu kwe-4,000 yenkxaso ye-$
I-Ether ifikelela kwindawo ethengwe kakhulu
Ixabiso langoku: $ 4,378.89
Intengo yeNtengiso: $ 518,599,081,409
Umthamo wokuThengisa: $ 13,841,659,212
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 21, 2021
NgoNovemba 18, I-Ethereum (i-ETH) ixabiso lehle laya kutsho phantsi kwe-$3,959 njengoko iinkunzi zathenga iidiphu. Namhlanje, ixabiso le-ETH likhuphuke laya kwi-4,438 yeedola kodwa lijongene nokuchasana kwinqanaba eliphezulu lakutshanje. I-altcoin enkulu ngoku ingaphezulu kwe-50-day line SMA kodwa ngaphantsi kwe-21-day line SMA. I-Ether iya kuphinda iphinde iphinde iqhube i-bullish ukuba ixabiso liphule ngaphezu kwe-21-day SMA. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso liphuka ngaphantsi komgca we-50 weentsuku ze-SMA, uxinzelelo lokuthengisa luya kuqalisa kwakhona. Nangona kunjalo, i-Ethereum iya kuqhubeka iguquguquka phakathi kwee-avareji ezihambayo ukuba imigca ihlala ingaphulwanga.
I-Ethereum ikwinqanaba le-49 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Isalathiso sibonisa ukuba kukho ukulingana phakathi kokubonelela kunye nemfuno. Umgca weentsuku ze-21 kunye ne-50-day line-avareji ezihambayo zihla zinyuka zibonise ukunyuka. I-Ether ikhuphukele kummandla othengisiweyo njengoko ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu.
Kwitshathi yeyure ye-4, i-ETH/USD iphinde yaqala ukunyuka njengoko ikhefu lexabiso lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo. Ixabiso le-ether liyehla njengoko lifikelela kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Okwangoku, ngoNovemba 20 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 4,554.67.
Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Ether iyancipha kwi-Downside, inokufumana iNkxaso ngaphezu kwe-$ 4,476
U-Ethereum ujongene nokugatywa kwi-$ 4,820 yokuchasana
U-Ether unoxinzelelo lokuthenga olomeleleyo ngaphezulu kwe- $ 4,476
Ixabiso langoku: $ 4,595.06
Intengo yeNtengiso: $ 543,774,572,274
Umthamo wokuThengisa: $ 11,991,717,575
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 14, 2021
Ukususela ngoNovemba 9, I-Ethereum (i-ETH) ixabiso sele libuyela kwicala elisezantsi. Kwinyathelo lexabiso langaphambili, u-Ether wadibanisa i-$ 4,820 ephezulu kodwa wachaswa. Izibane ezibuyiselweyo zinemisila emide ekhomba inkxaso ye-4,476 yeedola. Imisila emide ichaza ukuba inkxaso ye-4,476 yeedola inexinzelelo olunamandla lokuthenga. Oku kuthetha ukuba iibhere zinokuba nobunzima bokungena kwinqanaba lenkxaso. I-ETH/USD ithengisa kancinci ngenxa yobukho bamakhandlela amancinci omzimba.
I-Ethereum ikwinqanaba le-60 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-Ether ikwindawo ye-uptrend kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu. I-Ether ingaphezulu kwe-40% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Umyinge weentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zihla zinyuka zibonisa ukunyuka. Umyinge weentsuku ze-21 ezihambayo zibonisa inkxaso kwimivalo yexabiso.
Kwitshathi yeyure ezi-4, i-ETH/USD ikwintshukumo ehlayo. Ngomhla we-10 kaNovemba, u-Etere waphonswa kwi-4,465 yenkxaso kunye nokubuyisela umva. Ikhandlela elide libonisa uxinzelelo olunamandla lokuthenga ngaphezu kwelo nqanaba. Kusenjalo, ngoNovemba 12; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-61.8% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 4,355. 92.
Imirhumo yerhasi ye-Ethereum yanda kakhulu phakathi kokuqaliswa kwe-ENS
Ngokutsho kwedatha yakutshanje evela kwi-Bitinfocharts, umyinge wemali yokuthengiselana kwinethiwekhi ye-Ethereum irekhode ukunyuka kwe-meteoric ukuya kwi-$ 63 ngoLwesibini, umrhumo wesibini ophezulu kwirekhodi. Elona liphezulu kwirekhodi lenzeka ngoMeyi 12 xa ixabiso legesi eliphakathi libetha i-70 yeedola ngokuthengiselana. Nangona kunjalo, eli nani lehlile laya kutsho kwi-57 yeedola, idatha yexesha lokushicilela.
Ngokuqhelekileyo, iindleko zegesi ziyahluka ngokusekelwe kuhlobo lwentengiselwano. Ukutshintshwa kwe-ERC-20 elula kuya kubiza kakhulu ngaphantsi kwe-Smart Contract interaction enzima. Ngokutsho kwe-Etherscan, inokubiza kancinci njenge-$ 45 ukuthumela iithokheni ezisekelwe kwi-Ethereum. Nangona kunjalo, inokubiza ngaphezulu kwe-130 yeedola ukuququzelela utshintsho lwethokheni kwi-Uniswap umaleko 1.
Ukuphawula kwimirhumo yegesi ye-Ethereum egqithisileyo, umhlalutyi odumileyo we-crypto "Mr. Umnenga” tweeted ukuba:
"Kubiza i-$ 500 + kwiintlawulo zokudlulisa i-$ 20 kwi-blockchain ye-#Ethereum.
Iibhanki ziyangcangcazela luloyiko. ” …
Ethereum Igama Inkonzo Umvuzo Frenzy Ukubangela Ukunyuswa kweMirhumo yegesi
Iingxelo zibonisa ukuba isizathu esinokwenzeka semali yegesi egqithisiweyo yi-airdrop ye-Ethereum Name Service (ENS), eyaqaliswa ngoLwesibini, ngosuku olufanayo umrhumo we-ETH wabetha kwindawo yesibini ephezulu.
Ukubanga imivuzo ye-ENS, abanikazi besizinda kufuneka basebenzise igesi. Ekubeni aba banini bafumana amathokheni mahhala, abanalo ixhala malunga nokuchitha. Ngelixa iithokheni zingabangwa kude kube nguMeyi ka-2022, ukunyuka kwexabiso kwangoku kubangele uninzi lwaba banini ukuba bachithe imivuzo yabo.
Ngaphambi kokuba i-Binance ibhale i-ENS ngoNovemba 10, abasebenzisi banokuthengisa kuphela amathokheni abo kwi-Uniswap, exabisa i-$ 100 kwiimali zegesi. Ngokwengxelo evela kwi-CryptoFees, i-ENS yenze i-834 yezigidi zeedola kwiimali zenethiwekhi ngosuku lokuqaliswa kunye ne-720 yezigidi ezongezelelweyo izolo. Okwangoku, i-ENS yabetha irekhodi eliphezulu le-$ 83.40 kwiseshoni yokuqala yaseAsia namhlanje.
Okubangela umdla kukuba, kunye neentlawulo zenethiwekhi kubanini be-ETH, ukutshiswa kwamathokheni kuye kwanda kakhulu. I-Ultrasound.Imali isandul 'ukuxela ukuba i-841,000 ETH (exabisa i-3.95 yeebhiliyoni zeedola ngokusekelwe kwixabiso langoku) itshise ukususela ekuphuculweni kwe-EIP-1559 ngo-Agasti.
tags Ethereum, Imirhumo yeGesi, iindaba
Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Ether iphinda ibuyele ngaphezulu kwe-$ 4,700, iqhubela phambili i-Upside Momentum
Ixabiso le-Ethereum libuyisela ngaphezulu kwe-$ 4,700 inkxaso
Iinkunzi ze-Ether zijolise kwi-$ 4,820 ukuxhathisa
Ixabiso langoku: $ 4,832.88
Intengo yeNtengiso: $ 573,920,310,843
Umthamo wokuThengisa: $ 18,787,918,479
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 10, 2021
Ukusukela nge-29 kaSeptemba, I-Ethereum (i-ETH) ixabiso likwi-uptrend. Ixabiso lika-Ether liye lenza uluhlu oluphezulu oluphezulu kunye noluphantsi oluphezulu. Ngomhla we-8 kaNovemba, ixabiso likaEtere lenze phezulu kwi-$ 4,820. Ukususela ngoNovemba 9, ixabiso le-Ether liye lawa ukuze lenze iphantsi. Nje ukuba oko kusekiwe, i-uptrend iya kuqalisa kwakhona. Oku kube linyathelo lexabiso ixesha elithile. I-uptrend iya kuqhubeka nje ukuba imivalo yexabiso ingaphezulu kwee-avareji ezihambayo kunye ne-trend line.
I-Ethereum ikwinqanaba le-65 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-RSI ihlahlela ngokuthe tye. Umgca wokuhamba kwe-bullish uzotywe ubonisa amanqanaba enkxaso yamaxabiso. Ukuba ixabiso liyaphuka kwaye livale ngaphantsi komgca wokuhamba, i-uptrend inokupheliswa. I-Ether ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Amaqela estochastic sele ethambekile kulo mmandla uthengwa kakhulu.
Kwitshathi yeveki, i-ETH/USD ikwi-uptrend egudileyo. Kusenjalo, ngoSeptemba 20; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 5,355. 80.
Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Ether Trades Marginally Ngaphezu kwe-4,600 yeedola, ifikelela kuMmandla oThengisiweyo.
Ixabiso le-Ethereum lifikelela kummandla othengwe ngokugqithisileyo
I-Ether inokujongana nokugatywa kwinqanaba le-4,633 yeedola
Ixabiso langoku: $ 4,611.73
Intengo yeNtengiso: $ 545,311,798,244
Umthamo wokuThengisa: $ 13,741,205,012
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 7, 2021
I-Ethereum (i-ETH) ixabiso liya phezulu. Namhlanje, i-altcoin enkulu ifikelela kwi-4,578 yeedola kwaye ibuyisela umva. Ukuhamba kwexabiso kuye kwaba yinto engabalulekanga ngenxa yobukho bamakhandlela amancinci omzimba. Iimpawu zexabiso zibonise imeko ethengwe ngokugqithisileyo ye-cryptocurrency. I-uptrend yangoku inokuthi ijongane nokwaliwa. Ngomhla we-12 kaMeyi, i-altcoin enkulu yachithwa kwi-4,373 yeedola eziphezulu. I-altcoin inqabile ukuya ngaphantsi kwe-1,690 yeedola njengoko iinkunzi zathenga iidiphu.
I-Ethereum iwele kwinqanaba le-65 ye-Relative Strength index period 14. Nangona i-retracement, i-crypto isendaweni ye-uptrend kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu. I-Ether isengaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike igqithise kakhulu ukususela ngoNovemba 6. Imarike ikwimo ye-bullish.
Kwitshathi yeeyure ze-4, i-ETH/USD ikwi-uptrend. Ixabiso liphuke ngaphezu kwee-avareji ezihamba phambili ukuya phezulu. Okwangoku, ngoNovemba 7 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 4,633. 76.
ETH / USD - 2 Itshathi yeYure
Uhlalutyo lwexabiso le-Ethereum (ETH): I-Ether iqhubela phambili njengoko i-Altcoin Amandla angaphantsi akhula
Iintlanganiso zexabiso le-Ethereum ukuya kwi-4,640 yeedola ephezulu
I-Ether isondela kummandla othengwe ngokugqithisileyo
Ixabiso langoku: $ 4,562.90
Intengo yeNtengiso: $ 539,294,686,287
Umthamo wokuThengisa: $ 19,693,495,804
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 4,000, $ 4,500, $ 4,000
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 3, 2021
Ethereum's (ETH) pirayisi iqhubekile nokunyuka phezulu phezulu. I-uptrend iye yahambelana kwinqanaba eliphezulu. Namhlanje, i-altcoin enkulu ifikelele kwi-4,640 yeedola kodwa ayikwazanga ukuphula i-high yamva nje. I-cryptocurrency ibuyele ezantsi kwe-4,541 yeedola kwaye yaphinda yaqala phezulu. Namhlanje, ukuba abathengi banokutyhala ixabiso ngaphezulu kwe-4,640 yeedola eziphezulu, imarike iya kuhlangana ukuya kwi-5,000 yeedola. Nangona kunjalo, ukuba abathengi bayasilela ukuphula i-high yamva nje, i-Ether iya kuwa kwaye iphinde iqalise ukuhamba ngecala. Okwangoku, i-altcoin iphinda ibuyele kwinqanaba eliphezulu.
I-Ethereum ikwinqanaba le-67 le-Relative Strength index period 14. I-crypto iya kufikelela kwindawo ethengisiweyo kwinqanaba le-70. Abathengisi baya kuvela kummandla othengisiweyo ukutyhala amaxabiso phantsi. Umgca weentsuku ze-21 kunye nomgca weentsuku ze-50 ezihambayo zinyuka phezulu zibonisa ukunyuka. I-Ether ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwisantya esiphezulu kodwa ifikelele kwindawo ethengwe kakhulu.
Kwitshathi yeeyure ze-4, i-ETH/USD ikwi-uptrend eyomeleleyo. I-altcoin ikwi-retracement encinci. Okwangoku, ngo-Oktobha 29 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye inqanaba le-$ 5,001.39.